ज्ञानेन्द्र शाहसँग डराइन, डोरमणिसँग किन झुक्ने ? मुख्यमन्त्री पौडेल सिआईएको एजेन्ट हुन् (भिडियोसहित) – Etajakhabar
प्रदेश नम्बर ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका केशव स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सिआईएको एजेण्ट भएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘ललितपुरको भैसेंपाटीमा उनको सयन कक्ष छ । उहाँको त्यो कायार्ललय द एशिया फाउण्डेशनको फण्डिङमा फर्निसिङ गरिएको छ । त्यही भैंसेपाटीको घरमा उहाँले रसगुल्ला र रसपान गर्नुहुन्छ भन्छन् । तर, त्यो रसगुल्ला र रसपान के हो ? मलाई थाहा छैन् । त्यो अफिसको सबै स्टाफ र फर्निचरको फण्डिङ द एशिया फाउण्डेशनले गरेको छ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २०, २०७५ समय: २२:३७:२७